एन्ड्रोइडका लागि अन्तिम काल्पनिक ब्याटल रोयाल एपीके डाउनलोड [खेल] - लुसो गेमर
भर्खरै एन्ड्रोइड गेमरहरूका लागि फाइनल फ्यान्टेसी ब्याटल रोयाल नामक नयाँ एक्शन ब्याटलफिल्ड गेमिङ एप ल्याइएको छ। जहाँ खेलाडीहरूले प्रतिद्वन्द्वीलाई लड्ने र हराउने यो ठूलो अवसर दिए। प्रतिद्वन्द्वीहरू राक्षस र घातक रोबोटको रूपमा अगाडि देखा पर्न सक्छन्।
सुरुमा, गेमप्ले एन्ड्रोइड गेमरहरू बीच राम्रो लोकप्रियता प्राप्त गर्न असमर्थ थियो। यद्यपि, गेमप्ले भित्रको प्रगति र सुधारहरूको साथ। अब गेमरहरू साथीहरू र अन्य खेलाडीहरूसँग रणभूमि भित्र खेल्न र भाग लिन मन पराउँछन्।
सम्झनुहोस् युद्ध खेल आश्चर्य सहित सुविधाहरू मा धनी छ। र गेमरहरूको रुचि र मागलाई विचार गर्दै, यहाँ हामी मुख्य विकल्पहरू सहित सबै विवरणहरू उल्लेख गर्नेछौं। त्यसैले तपाइँ यस कार्य गेमप्लेमा भाग लिन मनपर्छ त्यसपछि यहाँबाट नवीनतम एपीके डाउनलोड गर्नुहोस्।
अन्तिम काल्पनिक युद्ध रोयाल Apk के हो
Final Fantasy Battle Royale Android एउटा अनलाइन एक्शन गेमिङ एप हो। जहाँ दर्ता भएका खेलाडीले प्रतिद्वन्द्वीसँग लड्ने यो ठूलो अवसर दिएका छन् । र आफूलाई सबैभन्दा शक्तिशाली शिन्राको कुलीन सैनिकहरू मध्ये मान्थे।
रणभूमिहरू उच्च ओक्टेन हतियारहरूले भरिएका छन्। ती हतियारहरूले सजिलैसँग एक शटमा ठूलो राक्षसलाई नष्ट गर्न सक्छन्। यद्यपि, त्यस्ता घातक हतियारहरूलाई प्रिमियम श्रेणीमा वर्गीकृत गरिएको छ। जसको मतलब गेमरहरूलाई ती बन्दुकहरू खरिद गर्न निर्देशन दिइन्छ।
ती बन्दुकहरू अनलक गर्ने अर्को विकल्प छ। त्यो विकल्पलाई रणभूमि भित्र राम्रो बेन्चमार्क सहित उन्नत खेल कौशल चाहिन्छ। किनभने यदि तपाईं स्पष्ट लडाई कौशल प्रयोग गरेर लडाई सन्तुलनमा सफल हुनुहुन्छ। त्यसपछि तपाइँ राम्रो अंक र उपहार संग पुरस्कृत हुन सक्छ।
पछि गेमरले अन्य प्रो वस्तुहरू अनलक गर्न ती अंकहरू र पुरस्कारहरू प्रयोग गर्न सक्छन्। जसमा स्किन, इमोट्स, हतियार, प्रभाव, मोड र थप कुराहरू समावेश छन्। युद्धभूमि भित्र, बन्दुक, मेली र जादूले विरोधीहरूलाई मार्न प्रमुख भूमिका खेल्छ।
नाम अन्तिम काल्पनिक युद्ध रोयाल
विकासकर्ता स्क्वायर ENIX कं, लिमिटेड
प्याकेज नाम com.square_enix.android_googleplay.ff7fsww
आवश्यक एन्ड्रोइड ..7.1.। र प्लस
याद गर्नुहोस् कि क्षेत्र भित्र राक्षसहरूलाई हराउनले विश्वव्यापी स्तरलाई धक्का दिन मद्दत गर्नेछ। लडाइँ गर्दा, यदि कुनै गेमरले राक्षसहरू सहित प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई पराजित गर्न कठिनाई अनुभव गर्दछ। त्यसपछि उसलाई/उनीलाई साथीहरूलाई मद्दत संकेत उत्पन्न गर्न निर्देशन दिइन्छ।
एकपटक सहयोगीहरूले तपाईंको मद्दत सङ्केत फेला पारेपछि, तिनीहरूले छिट्टै प्रतिक्रिया दिनेछन् र तपाईंलाई जमिनभित्र सहयोग गर्नेछन्। अधिकारीहरुका अनुसार गेमप्लेले टूर्नामेन्ट लगायतका विभिन्न कार्यक्रमहरु आयोजना गर्दछ । तसर्थ यी सबै जानकारी समाचार श्रेणी भित्र पुग्न सकिन्छ।
ती कार्यक्रमहरू भित्र प्रत्यक्ष सहभागिता देखाउँदा विभिन्न पुरस्कार र टोकनहरू कमाउन मद्दत गर्नेछ। गेमप्ले तौल र आकारको हिसाबले धेरै भारी छ। यहाँ प्रयोग गरिएको पिक्सेल घनत्व सहित ग्राफिक्स उन्नत र सघन छ।
यो खेल सञ्चालन गर्नको लागि न्यूनतम एन्ड्रोइड संस्करण 7.1 र प्लस आवश्यक छ। खेल खेल्नको लागि आवश्यक न्यूनतम र्याम 3GB हो। लक्ष्यहरू पूरा गर्नाले शस्त्रागारहरू अपग्रेड गर्न मद्दत गर्नेछ। राक्षसहरूलाई मार्दा पनि सीपहरू बढाउन मद्दत गर्दछ।
खेल भित्र धेरै फरक शैलीहरू र मोडहरू थपिएका छन्। कुनै पनि मोड चयन गर्नाले लुकेका ठाउँहरू अन्वेषण गर्न मद्दत गर्नेछ। यसबाहेक, गेमरहरूले सहयोगको लागि युद्ध मैदान भित्र अन्य खेलाडीहरूलाई आमन्त्रित गर्न सक्छन्। त्यसैले तपाईं साथीहरूसँग खेल्न तयार हुनुहुन्छ त्यसपछि अन्तिम काल्पनिक युद्ध रोयाल डाउनलोड स्थापना गर्नुहोस्।
गेमि app अनुप्रयोग यहाँबाट डाउनलोड गर्न स्वतन्त्र छ।
गेमप्ले स्थापना गर्नाले युद्ध स्थिति प्रस्ताव गर्न मद्दत गर्नेछ।
जहाँ रोबोट र राक्षस मेशिनहरूले ब्रह्माण्डमा नियन्त्रण पाएका थिए।
अब खेलाडीहरूले आफ्नो सटीक लडाई कौशल प्रयोग गर्न आवश्यक छ।
ती राक्षसहरूलाई हटाउन र राम्रो पुरस्कार कमाउन।
राक्षसहरूलाई मार्नेले विश्वव्यापी रूपमा स्तर बढाउन मद्दत गर्नेछ।
राक्षसहरूसँग लड्दा पनि कौशल सुधार गर्न मद्दत गर्न सक्छ।
आर्सेनल अपग्रेड गर्नुहोस् र राम्रो स्थिति प्राप्त गर्नुहोस्।
दर्ता विकल्प अनिवार्य छ।
अन्तिम काल्पनिक युद्ध रोयाल खेल कसरी डाउनलोड गर्ने
गेमिङ एप हाल प्ले स्टोरबाट पहुँच गर्न सकिने छ। यद्यपि, गेमिङ एपीके फाइलहरू केही गेमरहरूका लागि अगम्य हुन सक्छन्। किनभने यसलाई प्रतिबन्धात्मक श्रेणीमा वर्गीकृत गरिएको छ। यसबाहेक, केहि एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताहरूले Apk फाइल पहुँच गर्न धेरै अनुमतिहरू आवश्यक हुन सक्छ।
यद्यपि, यहाँ हाम्रो वेबसाइटमा, यी सबै प्रतिबन्धहरू स्थायी रूपमा हटाइएका छन्। र एन्ड्रोइड गेमरहरूले सजिलैसँग एक क्लिकमा यहाँबाट मूल गेमिङ एपीके फाइल डाउनलोड र पहुँच गर्न सक्छन्। गेमप्ले एपीके फाइल डाउनलोड गर्न कृपया प्रदान गरिएको डाउनलोड लिङ्क बटनमा क्लिक गर्नुहोस्।
हामीले समर्थन गर्ने र यहाँ प्रस्ताव गर्ने गेमिङ एप विशुद्ध मौलिक छ। यसको मतलब गेमरहरूले कुनै पनि अनुमति बिना उच्च ओक्टेन युद्ध अनुभव डाउनलोड गर्न र मजा लिन सक्छन्। सम्झनुहोस् हामीसँग प्रतिलिपि अधिकारहरू कहिल्यै हुँदैन। त्यसोभए यदि कुनै गेमरले समस्या अनुभव गर्यो भने उसले/उनले समर्थनलाई सम्पर्क गर्नुपर्छ।
हाम्रो वेबसाइटमा यहाँ धेरै फरक कार्य खेलहरू प्रकाशित र साझेदारी गरिएका छन्। ती उत्कृष्ट वैकल्पिक खेलहरू अन्वेषण गर्न कृपया निम्न लिङ्कहरूमा क्लिक गर्नुहोस्। जो हुन् PUBG Mobile 1.7 Apk र सेन्की बोरुटो एपीके.
यसैले तपाइँ गेमप्लेको रिलीजको लागि पर्खिरहनु भएको छ र पहुँचको लागि एक प्रामाणिक स्रोत खोज्दै हुनुहुन्छ। त्यसोभए तपाई केको लागि पर्खिरहनु भएको छ? यहाँबाट अन्तिम काल्पनिक ब्याटल रोयालको नवीनतम संस्करण डाउनलोड गर्नुहोस् र तीव्र युद्धको स्थिति खेल्नको लागि मजा लिनुहोस्।
विभाग कार्य, खेल ट्याग युद्ध खेल, अन्तिम काल्पनिक युद्ध रोयाल, अन्तिम काल्पनिक युद्ध रोयाल एपीके, अन्तिम काल्पनिक युद्ध रोयाल डाउनलोड, अन्तिम काल्पनिक युद्ध रोयाल खेल मेल अन्वेषण